အိမ်​စည်​သာဆိုရင်​ တရားခံသိ​အောင်​ က​လေးကိုအရင်​​ဆုံး​မေးမှာပဲ လို့ ရင်ဖွင့်​​လာတဲ့ ​ရွှေအိမ်​စည်​… - CeleLove
အိမ်​စည်​သာဆိုရင်​ တရားခံသိ​အောင်​ က​လေးကိုအရင်​​ဆုံး​မေးမှာပဲ လို့ ရင်ဖွင့်​​လာတဲ့ ​ရွှေအိမ်​စည်​…
သမီး​လေး ဗစ်​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ္စဟာ မလိုအပ်​ပဲ အရှုပ်​အ​ထွေးများစွာနဲ့ ပြည်​သူအများ ရင်​နဲ့မဆံ့ခံစား​နေရတဲ့ အမှုကိစ္စတစ်​ခုဖြစ်​သလို နာမည်​ကြီးအနုပညာရှင်​​တွေဟာလဲ ဒီသက်​ငယ်​မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ပြည်​သူ​တွေ နဲ့ တစ်​သားတည်းရှိ​နေခဲ့တာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ အမှုမှန်​ကိုအမြန်​ဆုံး​ပေါ်​ပေါက်​​စေချင်​သူ​တွေရဲ့ အသံများစွာထဲကမှ အလှမယ်​​ရွှေအိမ်​စည်​ရဲ့ အမြင်​နဲ့ ရင်​ဖွင့်​ခံစားမှု​တွေကိုလဲ AlinnMyay ချစ်​ပရိသတ်​ကြီးတို့ ဖတ်​ရှုနိုင်​ကြ​​အောင်​ မျှ​ဝေတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ရပါတယ်​နော် …။
” အိ်​မ်​စည့်​အမြင်​ဆိုရင်​​တော့ အမှုကိစ္စကြီးကိုအမြန်​ပြီး​စေချင်​တယ်​။ ပြီး​တော့ အဓိကက သူတို့ တရားခံရှာချင်​တယ်​ဆိုရင်​ အိမ်​စည်​ဆိုလို့ရှိရင်​​တော့ အရင်​ဆုံး က​လေးကို​မေးမှာပဲ။ ဒါ အိမ်​စည်​အရှင်းလင်းဆုံး​တွေးတာ​ပေါ့​နော်​ ” လို့ ​ရွှေအိမ်​စည်​က သူ့ရဲ့အမြင်​ကို အရိုးရှင်းဆုံး​ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်​​ …။
” အခုက ဘာဖြစ်​​နေမှန်း​မသိဘူး။ အမှုက ရှုပ်​သင့်​တာထက်​ပိုရှုပ်​​နေတယ်​။ ဒီအမှုကိစ္စကို အစိုးရ​အ​နေနဲ့ အမြန်ဆုံး ကိုင်​နိုင်​​အောင်​ လုပ်​ရမယ်​။ အမှုကိစ္စကြီး မြန်မြန်လေးကို ပြီးသွားစေချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖြစ်သွားတုန်းကလည်းခံရသေးတယ်။ အမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်း ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စကို တမြုံ့မြုံ့နဲ့ ပြန်ထွက်ဆိုနေရတဲ့သူအတွက်က စိတ်ဒုက္ခရောက်ရောက်ရတယ်လေ ” လို့ သူက မုဒိမ်းမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ သမီး​လေးနဲ့မိသားစုဘက်​က စာနာကာကွယ်​​ပေးခဲ့ သလို ….
” မုဒိမ်းမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ က​လေးငယ်​အတွက်​လဲ အစိုးရ​ထောက်​ပံ့​ငွေနဲ့ က​လေးရဲ့စိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာပြန်​လည်​ထူ​ထောင်​နို​င်​ဖို့ Therapy အ​နေနဲ့ ကုသပြုစုမှု​တွေ လုပ်​​ပေးဖို့လိုအပ်​တယ်​လို့ အိမ်​စည်​ထင်​ပါတယ်​ ” လို့ လဲ အလှမယ်​​ရွှေအိမ်​စည်​က က​လေး​ရဲ့​ရေရှည်​ဘဝခရီးလမ်းအတွု​ အ​တွေးအမြင်​ရှင်းရှင်းနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ​ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်​နော် … ။ ။
EFIL – AlinnMyay(အလင်းမြေ)
အိမျ​စညျ​သာဆိုရငျ​ တရားခံသိ​အောငျ​ က​လေးကိုအရငျ​​ဆုံး​မေးမှာပဲ လို့ ရငျဖှငျ့​​လာတဲ့ ​ရှအေိမျ​စညျ​…
သမီး​လေး ဗဈ​တိုးရီယားရဲ့အမှုကိစ်စဟာ မလိုအပျ​ပဲ အရှုပျ​အ​ထှေးမြားစှာနဲ့ ပွညျ​သူအမြား ရငျ​နဲ့မဆံ့ခံစား​နရေတဲ့ အမှုကိစ်စတဈ​ခုဖွဈ​သလို နာမညျ​ကွီးအနုပညာရှငျ​​တှဟောလဲ ဒီသကျ​ငယျ​မုဒိမျးမှုနဲ့ပတျ​သကျ​ပွီး ပွညျ​သူ​တှေ နဲ့ တဈ​သားတညျးရှိ​နခေဲ့တာ အားလုံးအသိပဲဖွဈ​ပါတယျ​။ အမှုမှနျ​ကိုအမွနျ​ဆုံး​ပျေါ​ပေါကျ​​စခေငျြ​သူ​တှရေဲ့ အသံမြားစှာထဲကမှ အလှမယျ​​ရှအေိမျ​စညျ​ရဲ့ အမွငျ​နဲ့ ရငျ​ဖှငျ့​ခံစားမှု​တှကေိုလဲ AlinnMyay ခဈြ​ပရိသတျ​ကွီးတို့ ဖတျ​ရှုနိုငျ​ကွ​​အောငျ​ မြှ​ဝတေငျ​ဆကျ​​ပေးလိုကျ​ရပါတယျ​နျော …။
” အျိ​မျ​စညျ့​အမွငျ​ဆိုရငျ​​တော့ အမှုကိစ်စကွီးကိုအမွနျ​ပွီး​စခေငျြ​တယျ​။ ပွီး​တော့ အဓိကက သူတို့ တရားခံရှာခငျြ​တယျ​ဆိုရငျ​ အိမျ​စညျ​ဆိုလို့ရှိရငျ​​တော့ အရငျ​ဆုံး က​လေးကို​မေးမှာပဲ။ ဒါ အိမျ​စညျ​အရှငျးလငျးဆုံး​တှေးတာ​ပေါ့​နျော​ ” လို့ ​ရှအေိမျ​စညျ​က သူ့ရဲ့အမွငျ​ကို အရိုးရှငျးဆုံး​ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ​​ …။
” အခုက ဘာဖွဈ​​နမှေနျး​မသိဘူး။ အမှုက ရှုပျ​သငျ့​တာထကျ​ပိုရှုပျ​​နတေယျ​။ ဒီအမှုကိစ်စကို အစိုးရ​အ​နနေဲ့ အမွနျဆုံး ကိုငျ​နိုငျ​​အောငျ​ လုပျ​ရမယျ​။ အမှုကိစ်စကွီး မွနျမွနျလေးကို ပွီးသှားစခေငျြတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဖွဈသှားတုနျးကလညျးခံရသေးတယျ။ အမှုဖွဈလာပွီဆိုရငျလညျး ဖွဈပွီးသားကိစ်စကို တမွုံ့မွုံ့နဲ့ ပွနျထှကျဆိုနရေတဲ့သူအတှကျက စိတျဒုက်ခရောကျရောကျရတယျလေ ” လို့ သူက မုဒိမျးမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ သမီး​လေးနဲ့မိသားစုဘကျ​က စာနာကာကှယျ​​ပေးခဲ့ သလို ….
” မုဒိမျးမှုခံစားခဲ့ရတဲ့ က​လေးငယျ​အတှကျ​လဲ အစိုးရ​ထောကျ​ပံ့​ငှနေဲ့ က​လေးရဲ့စိတျ​ပိုငျးဆိုငျ​ရာပွနျ​လညျ​ထူ​ထောငျ​နျို​ငျ​ဖို့ Therapy အ​နနေဲ့ ကုသပွုစုမှု​တှေ လုပျ​​ပေးဖို့လိုအပျ​တယျ​လို့ အိမျ​စညျ​ထငျ​ပါတယျ​ ” လို့ လဲ အလှမယျ​​ရှအေိမျ​စညျ​က က​လေး​ရဲ့​ရရှေညျ​ဘဝခရီးလမျးအတျှု​ အ​တှေးအမွငျ​ရှငျးရှငျးနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ​ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ​နျော … ။ ။
EFIL – AlinnMyay(အလငျးမွေ)
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတွေကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဒီအချက်(၆)ချက်ကို လုပ်ပေးပါ